ဂျာမန် တိုးချဲ့မှု Cable Reel ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး ဂျာမန် တိုးချဲ့မှု Cable Reel - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Cable elsရာဝတီ > ဂျာမနီ Cable elsရာဝတီ > ဂျာမန် တိုးချဲ့မှု Cable Reel
Bohaoကေဘယ်လ်s ပံ့ပိုးပေး ဂျာမန် တိုးချဲ့မှု Cable Reel နှင့် အားဖြည့် ကေဘယ်လ် Max60 မီတာ နှင့်4ခြေစွပ် ၂.၅ မီတာမီတာ Schuko မိုးလုံလေလုံ druမီတာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အတန်းအစား IP20 ဘို့ မိုးလုံလေလုံ အသုံးပြုသည်။ ဝယ်ယူ ဥရောပ Socket Cable reel, ကျေးဇူးပြု ဆက်သွယ်ရန် Bohaoကေဘယ်လ်s, တရုတ် လူသိများတဲ့ ကေဘယ်လ် reel မီတာanufacturer.
ဂျာမန် Extension Cable Reel ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း
၂။ German Extension Cable Reel ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
ယူရို, CEI / IEC
ပြင်ပရှိ Power Power Cord Reel (၄ ခု) ၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်
၄။ ပြင်ပရှိ Power Power Cord Reel ၄ ခု၏ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်
ဥရောပစျေးကွက်အတွက်တိုးချဲ့ Cord Cable ကို Reel ၏ 5. ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း
ဥရောပစျေးကွက်အတွက် Extension Cord Reel ကို 6.Deliver, Shipping and Serving
hot Tags:: ဂျာမန် တိုးချဲ့မှု Cable Reel, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း
4x16A ခြေစွပ် ဂျာမနီ IP44 ရော်ဘာ Cable Reel